प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा गर्न तयार !!! – News Nepali Dainik
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा गर्न तयार !!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १२, २०७७ समय: १६:४८:०८
सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थाका कारण अहिले सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री ओलीको अबको कदम के हुने भन्नेमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार बिहानै वालुवाटारमा आकस्मिक रुपमा स्थायी समिति बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा गर्न तयार भएका छन् ।
अन्य दलहरुबीच छलफल गरेर ओलीले राजीनामा गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । बुधबार बालुवाटारमा बसेको ओली निकट स्थायी समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पनि ओली निकट नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि सो कुरालाई संकेत गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिलाई अन्यौलमा राख्न नहुने भन्दै छिटै निर्णय लिने जानकारी समेत दिएका छन् ।
‘दलहरुसँग परामर्श र सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुहुन्छ । मुलुकलाई अन्योलमा राख्नु हुदैन भन्ने भनाई हो’ प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाई छ । ओली पक्षको स्थायी समिति बैठक बिहीबार पनि बस्नेछ ।
यता आन्दोलनरत पक्ष नेकपाको पनि पेरिसडाँडामा बैठक बोलाइएको छ । दिउसो ४ वजे बैठक सुरु हुनु अघि प्रचण्ड नेपाल अहिले बुढानिलकण्ठ स्थित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई भेट्न पुगेका छन् । प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु प्रसाद सापकोटाले तीन नेताबीचको छलफल सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनले आगामी दिनमा मिलेर अघि बढ्ने विषयमा समझदारी भएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रचण्ड नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ । प्रचण्डले यस अघि पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अब नेकपावाट प्रधानमन्त्री बन्नु भन्दा पनि बाहिरवाट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
Last Updated on: February 24th, 2021 at 4:48 pm